Programmer's Diary: စလုံးစကား ပြောပါများ
“စကား စကား ပြောပါများ စကားထဲက ဇာတိပြ” ဟု ရှေးလူကြီးသူမတို့က ဆိုဆုံးမခဲ့ကြသည်။ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတွေ အတွက်တော့ “စလုံးစကား ပြောပါများ စကားထဲက လားပဲရ” ဟု မကြာခင် ထပ်မံဖြည့်စွက် ရမလို ဖြစ်နေပြီ ထင်သည်။ မျှော်လေတိုင်းဝေးနေသေးသည့် ရွှေပြည်ကြီးကို စွန့်ခွာကာ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာသို့ စွန့်စား ထွက်လာရသော မြန်မာတွေ တပုံတပင် ရှိသည့်အနက် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံပြီးလျှင် မြန်မာတွေ အများဆုံး စုရုံးရောက်ရှိရာ နိုင်ငံသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို “ရွှေ”ဟု တရားလွန် အမွှန်းတင်တတ်သော ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားများကိုမူ စလုံးဟု ခေါ်လေ့ရှိကြသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား အများစု နေ့စဉ် ပြောဆိုလေ့ရှိသော ဆင်းဂလိပ်ရှ် (Singlish)ကို စလုံးစကားဟု လွယ်လွယ်ဆိုလိုက်ပါရစေ။ ထိုစလုံးစကား ဟူသည် အင်္ဂလိပ်စကားကို အစီအစဉ်မကျစွာ ဖြစ်သလို ပြီးစလွယ်ပြောကြသော စကားတစ်မျိုးသာ ဖြစ်သည်။ ဥပမာ “Are you hungry?” ကို “you hungry lah?” ဟု လား ထည့်ကာ မေးခွန်းမေးနေသည့် သဖွယ် ပြောခြင်း၊ “No, I'm not hungry” ဟု ပြောရမည့်အစား “Nah, I not hungry loh” ဟု တရုတ်စကား ပြောနေသယောင်ယောင် အင်္ဂလိပ်စကား အကျိုးအပဲ့များကို ပြောကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာတွေသည် သင်လွယ်တတ်လွယ်ပါသည်။ အရိပ်ပြရုံနှင့် အကောင်မြင်တတ်ပါသည်။ သို့နှင့် စလုံးစကား များသည် စင်္ကာပူရောက်မြန်မာအများစုတို့၏ နှုတ်ခမ်းဖျားတွင် ဖောဖောသီသီ နေရာယူပါတော့သည်။ စလုံးစကား ပြောနိုင်သည်ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေသူ မြန်မာများကိုလည်း တွေ့ဖူးကြုံဖူးပါသည်။ မြန်မာအချို့ကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်ပင်မသိလိုက်ဘဲ စလုံးစကားများကို စွဲစွဲလန်းလန်း ပြောနေမိကြသည်လည်း ရှိပါသည်။ တချို့သော စလုံးများသည် အင်္ဂလိပ်စကားကို ရေရေရာရာ လည်လည်ဝယ်ဝယ်မပြောတတ်ကြသဖြင့် စလုံးစကားကို ဖြစ်သလိုပြောကြသော်လည်း အချို့ကတော့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ရုံးတွင်း၊ ကျောင်းတွင်း အတည်အတံ့ ပြောရမည့်နေရာတွင် တည်တည်တံ့တံ့ ပြောကြပြီး ထိုသို့ ပြောစရာမလိုသည့်အခါများတွင်တော့ စလုံးစကားဖြင့်သာ နှစ်ပါးသွားကြလေသည်။ ထိုအလေ့အထကို မသိနားမလည်သူ ရွှေမြန်မာတို့ကတော့ စလုံးစကားကို အတည်အတံ့ပြောရန် မလိုသည့် အခါတွင်ရော အတည်အတံ့ပြောရန် လိုသည့်အခါတွင်ပါ တွင်တွင်ကြီးသုံးကြလေရာ မြန်မာတွေ၏ အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်အတန်းသည် သုံးစားမရဟု မှတ်ထင်သွားကြပေလိမ့်မည်။
တစ်ခါက အလုပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးရန် အလုပ်အေးဂျင့်မှ ဖုန်းဆက်မှာကြားရာတွင် အလုပ်ရှင်သည် မြန်မာတချို့ကို အင်တာဗျူးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ထိုသူတို့သည် အင်္ဂလိပ်စကားရေလည်စွာ မပြောနိုင်ကြကြောင်း၊ ထို့အတွက် စိတ်အေးအေးထားကာ မေးသမျှကို ယုံကြည်မှုရှိရှိ ဖြေရန်လိုကြောင်း ပြောလာသည်ကို ကြုံဖူးပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် အမိဘာသာစကား ပြောနေသလို တရစပ်ပြောတတ်နေစရာ မလိုပါ။ အချက်ကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် တဘက်သားနားလည်အောင် ပြောနိုင်ဆိုနိုင်လျှင် အဆင်ပြေပါသည်။
စင်္ကာပူတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာထမင်းဆိုင်တစ်ခုတွင် ထမင်းသွားစားရာ ထမင်းဆိုင်ရှင်မှ ဆိုင်အတွက် လိုအပ်သည့်အရာများကို လာပို့ပေးရန် မှာကြားနေသည့်အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါသည်။ ထိုဆိုင်ရှင်သည် အသံကျယ်ကျယ် ကျယ်ကျယ်ဖြင့် စလုံးစကားများကို ဆူညံစွာအော်ဟစ်ပြောဆိုနေသည်မှာ ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်ဟု ဆိုရလောက်အောင် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ ကောင်းလှပါသည်။ ထိုဆိုင်ရှင်သည် ပညာတတ်တစ်ယောက် မဟုတ်ဟု စောဒကတက်ချင် တက်နိုင်ပါသည်။ ထိုဆိုင်တွင် ရှိသော ကူဖော်လောင်ဖက်အမျိုးသမီးကလေးများအတွက်တော့ စလုံးစကားကို တတွတ်တွတ်ပြောနိုင်သော ထိုဆိုင်ရှင်သည် လေးစားစရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ ထမင်းစား နေရင်း ဆက်ပဲစားရမလို ရပ်ပဲသွားရမလို ဖြစ်သွားစေခဲ့တာကတော့ အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။
ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်မဟုတ်ဟု ယူဆရသူ ထိုထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်၏ အဖြစ်အပျက်ကို ကြုံပြီး မကြာမီတွင် သူငယ်ချင်းတချို့နှင့် စကားစမြည်ပြောရန် တွေ့ဖြစ်ကြပါသည်။ စကားကောင်းနေကြတုန်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ ဖုန်းမှ ရုတ်တရက် အသံထမြည်လာသောကြောင့် “ဟာ.. အလုပ်က ဖုန်းဆက်ပြန်ပြီ” ဟု ညည်းကာ ထိုသူငယ်ချင်း က ဖုန်းပြောပါသည်။ “try to solve it yourself lah” “i outside now. i can't come back to office loh. Ask Steven” “OK lah, complaint to manager about him. He never helps u one” ဟု အမြီးအမောက်မတဲ့သည့် စလုံးစကားများကို အိတ်သွန်ဖာမှောက်သုံးကာ ပြောပါတော့သည်။ ထိုသူငယ်ချင်းသည် ပေါ်လီကျောင်းဆင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုသူငယ်ချင်း ဖုန်းပြောပြီးသွားသည့်အခါ “မင်း သတင်းစာ များများဖတ်ရင်ဖတ် ဒါမှမဟုတ် သတင်းလေး ဘာလေး ညဘက် အားရင် ကြည့်သင့်တယ်” ဟု အကြံပေးမိရာ “အဲဒါတွေ ဖတ်ဖို့ ကြည့်ဖို့ မအားပါဘူးကွာ” ဟူသည့် အဖြေကို ရလေသည်။ အမှတ်မရှိဘဲ ဆက်လက်ပြီး “ဒါဆိုလည်း အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကားလေးဘာလေး ကြည့်လေကွာ” ဟု ပြောမိပြန်တော့ “ရုပ်ရှင်လက်မှတ်က ဈေးကြီးတယ်ကွ.. ရောက်ပြီးကတည်းက တစ်ခါလား နှစ်ခါလားပဲ ကြည့်ဖြစ်တယ်” ဟု ပြန်ပြောပါသည်။ ထိုနေ့က စကားများများ ထပ်မပြောဖြစ်ဘဲ စဉ်းစားခန်းသာ ၀င်နေမိပါသည်။
“လား” ယဉ်ကျေးမှုတွင် ရွှေမြန်မာများ ပျော်ဝင်နေကြခြင်းအတွက် မည်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ။ မည်သူမပြု မိမိမှု ဟူသော စကားရှိပါသည်။ ကိုယ်ကောင်းလျှင် ခေါင်းမရွေ့ပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စိတ်ပါလက်ပါနှင့် ထိုသို့ ပြောတတ်သော အလေ့အထကြီးကို လက်ခံထားမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်၏ အားနည်းချို့ယွင်းချက်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မကြာမီကာလတွင် ဖြစ်ထွန်းလာမည့် နိုင်ငံတော်သစ်အတွက် ကမ္ဘာသုံး ဘာသာစကားဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်စကားကို အချက်ကျကျပြောနိုင်ဆိုနိုင် လူအများနှင့်ဆက်ဆံနိုင်သော အရည်အချင်းရှိသော လူငယ်များစွာ လိုအပ်လာပါမည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် စကားစလုံး “လား” ယဉ်ကျေးမှုရောဂါ စွဲကပ်နေလျှင် အမြစ်ပြတ်အောင် မောင်းထုတ်ဖို့ စွန့်လွှတ်ကြဖို့ အချိန်တန်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း။
(သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် ၁၁တွင် ဖော်ပြခဲ့သောအက်ဆေး)
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 10:58 PM
ကိုညီညီပြောတဲ့ စလုံး စကားတွေကြားထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မအောင်မြင်သေးဘူး...
August 11, 2007 12:27 AM
i totally agree with you .. it's good to use proper English at work and all.. but I faced with strange looks when i try to speak proper English inalot of cases.. some of the Singaporeans think you're just trying to show off by speaking proper English.. but worse, some don't even understand proper english.. if you order "Tea" atakopitiam, they'll Stare back.. but if you say "Teh (pronocuned Tay) it's all sweet. :)
I'd say use English for proper purpose and use singlish with your singaporean friends outside ..
August 12, 2007 11:17 AM
kpz >> ဟုတ်ကဲ့.. ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းလဲယူရမှာပေါ့ဗျာ
ko maung maung >> Well, you've got your gd point bro. No doubt. I had experienced that kinda alien's looks too. Thanks for your supplementary comment anyway. :)
August 14, 2007 10:52 PM
We Ain't Strangers Anymore
သံလွင်ကိုအိပ်မက်တဲ့အခါ ငါတို့ရဲ့တေးသွားကို ကြားလိမ...
သင်္ချာ၊ ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့် အတွေးဆန့်ကြည့်ခြင်း
မမေ့နိုင်သော ၁၉၈၈ သြဂုတ်လ ၈ရက်ည
၀င်းမြန်မာမှ ဇော်ဂျီသို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် ပရိ...